Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 63
Moa ve ny fotopampianarana momba ny fijaliantsika eto an-tany ho toy ny famonoana karmika, amin'ny lafiny iray amin'ny fanambarana teolojika momba ny fijaliantsika ho famotsoran-keloka any amin'ny helo, fa ny fanambarana roa dia tsy maintsy ekena amin'ny finoana fotsiny; Ary, ambonin'izany, ny iray dia mitovy amin'ny iray hafa amin'ny famokarana ny tsara fitondran-tena?
Ireo fotopampianarana roa ireo dia eo amin'ny sehatry ny parisy, ary tsy maintsy entina hinoana fa raha ny saina kosa dia ao anatin'ny tsy firaharahiana na ny zaza. Ekena ny fotopampianarana, mitovy amin'ny alalàn'ny abidia sy ny latabatra fitomboan'ny ankizy iray - amin'ny finoana.
Rehefa mandinika ireo fotopotorana ny saina misaina dia miorina amin'ny lalàna sy ny fahamarinana ny fahantrana eto an-tany ary voaporofo amin'ny alàlan'ny fiainana amin'ny fiainana, ary ny foto-pinoan'ny helo dia didim-pitsarana vita amin'ny alàlan'ny politika teolojika. Ny saina dia tsy mahita antony mahatonga ny fijaliana mandrakizay any amin'ny afobe ho fanonerana ny hadisoana betsaka amin'ny alàlan'ny tsy fahalalana amin'ny fiainana fohy eto an-tany, indrindra fa rehefa ny fahadisoana dia toa voatery noterena matetika noho ny herin'ny toe-javatra sy ny tontolo manodidina, izay tsy nataon'ilay mpampijaly.
Ny réincarnation ary ny fijaliana eto an-tany ho fanonerana karmika, rehefa ampiharina mba hanazavana ny zava-misy iainana, dia hita fa miasa araka ny lalàna, mitovy amin'ny latabatra fampitomboana sy aritmetika. Ny mijaly dia hita fa vokatry ny fihetsik'izy ireo hanohitra ny lalàna, ary tsy sazy fa ny traikefa ilaina amin'ny fianarana tsy hanao izany. Azo ekena kokoa ny fahitan-tsaina fa izao tontolo izao sy ny toeran'ny olombelona ao dia ny vokatry ny lalàna fa tsy noho ny vokatry ny fitadiavana olona.
Ny fotopampianana teolojika momba ny helo dia tsy azo lazaina ho tsara tahaka ny foto-pinoana teôsika momba ny famadihana ny karmika, hamoahana hatsarana ara-pitondran-tena, satria tsy afaka ny hananana hery ara-pitondrantena noho ny tahotra tsy mitanila. Ny fampianaran'ny afobe dia ny fanerena ny hatsaram-panahy amin'ny tahotra ny fanasaziana. Fa kosa mamadika ny fitsipi-pitondran-tena ary manome fihetsika tsy rariny.
Ny foto-pampianarana momba ny famadihana karmika amin'ny alàlan'ny fananganana indray, manampy ny saina hitady ny toerany manokana ary hiasa eto amin'izao tontolo izao, ary mampiseho azy ny tena lalana amin'ny fiainana. Ny hatsaram-pitondrantena no vokatr'izany.
Tsy misy porofo ny afobe teolojika. Nikomy ny fahatsapana fahamarinana ary mandroaka ny fahatahorana azy rehefa mitombo ny hery sy ny fahatakarana. Ny porofo ny karma dia ny fahatsapana fahamarinana hita ao amin'ny olona. Ny fahaizana mahita sy mahazo izany dia miankina amin'ny fahavononany hahita ny ratsy nataony ary hanitsy izany amin'ny fihetsika fotsiny.